ESI CHỌPỤTA NỌMBA PAYPAL GỊ - PAYPAL - 2019
PayPal nyocha nọmba akaụntụ
Ozugbo ọ bịara mara na Microsoft na-eduzi nlekọta nlekota nke ndị ọrụ na Windows 10, na ọbụna webatara modules pụrụ iche na ụdị ọhụrụ OS nke na-anakọta na zipu ozi dị iche iche na ihe nkesa onye nrụpụta, ngwá ọrụ software gosipụtara na-egbochi njikarị nke ozi nzuzo. . Otu n'ime ngwaọrụ kachasị arụ ọrụ maka nledo site n'aka onye okike nke sistemụ bụ W10 Privacy Program.
Ihe kachasị mkpa nke W10Privacy bụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke afọ nke nwere ike gbanwere site na iji ngwá ọrụ ahụ. Ojuju a nwere ike iyi ka ndi oru novice gabiga ókè, mana ndi okachamara ga-enwe obi uto nke ihe ngwọta banyere nzobe ha.
Nzuzo W10Phere bụ ngwá ọrụ siri ike nke ị nwere ike ime mgbanwe dị ukwuu na usoro. Otú ọ dị, na enweghi obi ike na mkpebi nke ịmepụ / kwụsị ọrụ OS ọ bụla, ekwesịrị iburu n'uche na ihe niile mmemme ahụ na-arụ site na mmemme ahụ nwere ike ịgbanwe. Ọ dị mkpa ka ịmepụta ebe ị ga-ebigharị tupu ịmalite ịmalite ọrụ ahụ, nke onye mmepụta ahụ chọrọ ka ọ bụrụ na ị ga-amalite ọrụ ahụ.
Ntọala nzuzo nzuzo
Ebe ọ bụ na ngwà W10Privacy bụ isi dị ka ụzọ isi gbochie njedebe nke data njirimara na omume ndị ọ na-eme na gburugburu ebe obibi, a na-eji ndepụta kachasịsịsị ọnụ nke sụgharịrị maka mgbanwe agbanwee. "Nchebe". Nke a bụ ohere iji gbanyụọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile njikwa arụmọrụ nke belata njirimara onye ọrụ.
Na mgbakwunye na ozi gbasara onye ọrụ ahụ, ndị mmadụ si na Microsoft nwere ike ịnwe mmasị na ozi gbasara ọrụ nke mmemme a na-arụnyere, ihe ntanetịime, na ọbụna ndị ọkwọ ụgbọala. Ịnweta ozi a nwere ike mechie na tab "Telemetry".
Iji gbochie onye mmepụta OS site na ịnweta data na ajụjụ ọchụchọ ndị e mere site na ọrụ ikikere nke Microsoft - Cortana na Bing, ngalaba B10 Nzuzo nwere ngalaba ntọala. "Chọọ".
A na-ebute data ọ bụla site na njikọ netwọk; ya mere, iji hụ na nchebe dị mma maka nchebe nke ozi nzuzo, ọ dị mkpa iji chọpụta njedebe nke usoro ịnweta netwọk dị iche iche. Onye Mmepụta W10Privacy enyerela maka taabụ a pụrụ iche na mmemme ya - "Network".
Tweaking ntọala maka igosipụta ihe dị na Windows Explorer fọrọ nke nta ka ọ ghara imetụta nchebe nke onye ọrụ site na nkwụsị data, ma na-enye ndozi ọzọ mgbe iji Windows 10. Explorer nhazi nwere ike ime na B10 Nzuzo.
Otu n'ime ụzọ Microsoft jiri zoo eziokwu nke espionage bụ iji ọrụ ọrụ kpuchie dị ka atụmatụ bara uru ma na-agba ọsọ na ndabere. Nzuzo W10Penye gị ohere ịkwụsị ihe ndị ahụ na-achọghị.
Ihe nchọgharị Microsoft
Nchọgharị - dị ka ụzọ isi nweta ịnweta Ịntanetị, enwere ike iji weghachite ozi nkeonwe nke ndị ọzọ nwere mmasị. Maka Edge na Internet Explorer, a ga-egbochi ọwa maka ịnyefe ozi na-adịghị mfe iji nhọrọ dị na taabụ otu aha ahụ na Nzuzo B10.
Ịchekwa ozi na ọrụ igwe ojii nke Microsoft na iji data sync na OneDrive bụ ihe dị mfe ma bụrụ akụkụ nzuzo nke iji Windows 10, nke na-adịghị eche nche na nzuzo.
Na Windows 10 ọrụ scheduler, na ndabara, ụfọdụ components na-setịpụrụ na-agba ọsọ, nke, dị ka ngwaọrụ pụrụ iche OS, nwere ike belata onye ọrụ nzuzo. Ị nwere ike iwepu mmegbu nke usoro omume atụmatụ na taabụ "Ọrụ".
Gbanwee taabụ ntọala "Tweaks" ekwesịrị ịpụta na atụmatụ ndị ọzọ nke W10Privacy. Ntuzi nke onye okike nke usoro a chọrọ ịmebata n'ime OS, na-emetụta ọkwa nke nchedo onye ọrụ site na nledo site n'aka onye mmepụta bụ nnọọ mediocre, ma kwe ka ị na-eme nke ọma na, ruo n'ókè ụfọdụ, ọsọ ọsọ Windows 10.
Dabere na atụmatụ ndị dị na taabụ "Firewall", onye ọrụ ahụ dị mma - gbanye ọkụ ọkụ ahụ n'ime Windows 10. N'ihi ya, ọ ga-ekwe omume igbochi okporo ụzọ zitere site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ niile arụnyere OS ma chee na ha nwere ike ịnakọta na ịnyefe data nkeonwe.
Ọ bụrụ na ojiji nke ihe omume ahụ gụnyere na mkpa Windows na iwepụghị ya ọbụna na ị na-atụle ohere nke ịghachị data, ị nwere ike ịdobe usoro ahụ site na igbochi ọrụ nke otu ihe dị n'akụkụ. Nke a na - eme ka njikwa nke ngwa ngwa dị elu. Iji gbochie ọrụ nke ngwa ngwa ọ bụla site na OS na ndabere na B10 Privacy, jiri taabụ "Ngwa Mgbochi".
Na mgbakwunye na modulu nke ejiji sistemụ, onye ọrụ ahụ nwere ike ịnwụ site na arụ ọrụ zoro ezo nke ngwa ndị anatara n'aka Ụlọ Ahịa Windows. Ị nwere ike wepu ihe omume ndị ahụ site na iji ntinye akara n'ime igbe nlele nke ngalaba pụrụ iche nke ngwa ahụ.
Na mgbakwunye na mmemme nke onye ọrụ ahụ, site na iji W10Privacy dị mfe iwepu na ngwa usoro site na iji taabụ kwesịrị ekwesị. Ya mere, ọ ga-ekwe omume ọ bụghị naanị iji mee ka usoro nzuzo nke usoro ahụ dịkwuo elu, kamakwa iji belata oghere disk nke sistemụ arụmọrụ na PC.
Mgbe ịchisịrị Windows na, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-eji W10Privacy na ọtụtụ kọmputa, ọ dịghị mkpa ọ bụla iji hazie ngwaọrụ ndị ọzọ. Ozugbo ị kọwapụtara ngwa ngwa ahụ, ịnwere ike ịchekwa ntọala ahụ na faịlụ nhazi pụrụ iche ma jiri ya emechaa ma ọ bụrụ na ị naghị eji oge oge.
Nyere usoro aka
Nyocha nke mmechi nke ọrụ nke W10Privacy, ọ dị mkpa iji mara ọchịchọ nke onye dere akwụkwọ ahụ iji nye onye ọrụ ahụ ikike ịchịkwa usoro nke ịgbanwe usoro sistemụ ahụ. Nkọwa zuru oke nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nhọrọ ọ bụla na-apụta ozugbo mgbe ị na-atụgharị òké ahụ n'ihe atụ mmemme kwekọrọ.
A na-eme ka ọkwa nke mmetụta na usoro ihe si na ngwa nke ihe dị na B10 nzuzo zubere site na agba, na-egosipụta aha nke nhọrọ ahụ.
Ọnụnọ ebe ndị Russia;
A nnukwu ndepụta nke ọrụ. Na-enye maka iwepụ / kwụsị ọrụ nke ihe niile, ọrụ, ọrụ na modul nke na-emetụta ọkwa nke nzuzo;
Atụmatụ ndị ọzọ maka ịmezi usoro ahụ;
Njirimara ngosi na njirimara nke onye ọrụ;
Enweghi ihe ndozi na aro iji kwado ngwa ngwa site na ndi mbido.
Nzuzo W10Pote bụ ngwá ọrụ dị ike nke na-eburu ikike niile dịnụ iji gbochie Microsoft si nledo na onye ọrụ, ngwa na omume ha na-eme na Windows. A haziri usoro ahụ n'ụzọ dị mfe, nke na-eme ka o kwe omume iji gboo ọchịchọ na mkpa nke onye ọ bụla os na njikwa banyere ọkwa nke nzuzo.
Download W10Privacy for free
Windows 10 Nzuzo Ndozi Tweaker nzuzo Windows Zoo 10 Ashampoo AntiSpy maka Windows 10
W10 Nzuzo bụ ngwá ọrụ multifunctional nke na-enye gị ohere iji nwayọọ na zuru ezu sistemụ arụmọrụ iji gbochie nkwụsị nke data dị iche iche na sava Microsoft.
Onye Mmepụta: Bernd Shuster